Global day of prayer Hotanterahina manomboka ny 21 mey
Fiangonana FJKM Tsy hisy aloha ny Synoda Lehibe faha-19
Misy ny Hafatra Pastoraly navoakan’ny Fiangonana FJKM mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny fiangonana, izay miantefa amin’ny ambaratongan-drafitra rehetra ao anatin’ny Fiangonana.
Fiangonana Loterana Malagasy Nanao antso fanairana
Tao anatin’ny herinandro no namoizan’ny Fiangonana Loterana Malagasy na ny FLM ireo Raiamandreny am-panahy roa dia ny Filohan’ny fiangonana am-perinasa sy ny teo aloha.
Fiangonana Loterana Malagasy Nodimandry ny Pastora Dr Rabenorolahy
Nodimandry vokatry ny valanaretina coronavirus Andro vitsy taorian’ny fodiamandrin’ny Filoha am-perinasan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) Pasitora Dr Rakotonirina David ny alin’ny sabotsy 11 jolay lasa teo vokatry ny valanaretina coronavirus,
Diosezy Antsirabe Mikatona avokoa ny Eglizy Katolika
Mikatona avokoa ny Eglizy KATOLIKA manerana ny diosezy Antsirabe nanomboka ny 8 Jolay ka hatramin’ny Alatsinainy 20 Jolay 2020.
Fiangonana hiverina hisokatra 170 isan-kerinandro ny fangatahana voarain’ny prefektiora
Mbola ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana tanteraka isika eto ankehitriny. Mbola voafetra ho 50 isaky ny efitrano ihany koa ireo mpino azon’ny fiangonana raisina noho izany eny fa na dia ho an’ireo fiangonana lehibe mahazaka olona an-jatony aza.
Pasitera Fabrice Rabenjarisolo “Tsangambaton’ny teny Malagasy ny baiboly”
Feno 185 taona katroka omaly alahady 21 jona ny baiboly Malagasy izay zokiny indrindra aty Afrika tamin’ny fandikana azy tamin’ny tenim-pirenena. 55 taona kosa ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy na ny FMBM.
Mpanao propagandin'ny Apostoly tsaratsara Nahatezitra ny olona teny Anosipatrana
Nampitangorona olona teny amin ny arabe mihazo an'Anosipatrana Ilanivato iny ity tovolahy miloloha ny sarin'ny apostoly Tsaratsara miaraka amin'ny baiboly.
Hotanterahina manomboka ny 21 mey ho avy izao ihany ilay hetsika Global day of prayer karakarain’ny mpiara-mamaky ny Baiboly sy ny mampiely Baiboly Malagasy.
Hanomboka amin’ny 06 ora sy fahefahany hariva izany haparitaka amin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera facebook hampitomboana hatrany ny finoan’ireo mpino Kristiana tsy hanavahana fiangonana no sady hitondrana am-bavaka ny firenena Malagasy. Hitohy amina vavaka mandritra ny folo andro tsy an-kiato izany aorian’io daty voatondro io ka anisan’ny hangatahana mba hivavaka sy hitalaho amin’Andriamanitra ny Kristiana isan-tokantrano hivoahan’ny firenentsika amin’izao areti-mandoza coronavirus izao. Ny 30 mey izany vao hifarana. Tsiahivina moa fa tamin’ny taona 2000 no nanomboka ny hetsika Global day of prayer. Firenena mihoatra ny 240 maneran-tany no efa mampihatra azy ankehitriny, manana tanjona famelon’aina hatrany ny fanahin’ireo mpino kristiana sy hanohana am-bavaka ny mpiara-belona.